Filohan’ny CFM: “Mila fahefana bebe kokoa ireo CCO-n’ny faritra” | NewsMada
Filohan’ny CFM: “Mila fahefana bebe kokoa ireo CCO-n’ny faritra”
Miompana amin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ny toromarika ara-tsosialy sy toekarena naroson’ny CFM ho an’ny fanjakana: inona avokoa ireo fepetra tokony hatao? “Ao anatin’izany, ny fanatsarana ny fitantanana ny fanampiana”, hoy ny fanazavan’ny filohan’ny CFM, i Maka Alphonse.
Eo koa ny tokony hanampiana ireo CCO : omena andraikitra bebe kokoa ireo any amin’ny faritra mba handray ny fepetra mifanandrify aminy, arakaraka ny zava-misy any an-toerana.
Samy manana ny maha izy azy ny faritra misy azy. Haparitaka bebe kokoa izany ny fahefana: misy baiko tokana avy any ambony, fa omena ny fahefana sahaza azy ireo CCO any amin’ny faritra.
Ao anatin’izany koa ny hoe: ahoana ny tokony hanampiana ireo mpisehatra miatrika ny ady amin’ny fihanaky ny Covid-19? Anisany ireo mpiasan’ny fahasalamana, ireo mpitandro filaminana, ireo olom-panjakana samihafa isan-tsehatra.
Notsiahiviny fa manome alalana ny CFM hanao toromarika ho an’ny fanjakana ny lalàna mifehy ny fampihavanam-pirenena. Voalaza amin’izany fa tokony hovalian’ny fahefana mpanatanteraka eo amin’ny parlemanta io toromarika io.
Marihina fa efa volana vitsivitsy izay no nanoloran’ny CFM ny toromarika ho an’ireo andrimpanjakana samihafa.